Global Aawaj | » पाचौं मिस्टर हिमालय विजेता (२०७१) : आशालाग्दो खेलाडी खनाल पाचौं मिस्टर हिमालय विजेता (२०७१) : आशालाग्दो खेलाडी खनाल – Global Aawaj
पाचौं मिस्टर हिमालय विजेता (२०७१) : आशालाग्दो खेलाडी खनाल
वि.सं. २०३८ सालमा काभ्रेमा रामहरि खनालको जन्म भएको थियो । दधिलाल र नन्दकुमारीको सातौँ सन्तान मध्ये कान्छा उनी सानोमा निकै दुब्ला पातला थिए । अध्ययनका लागि २०६२ साल तिर खनाल काठमाण्डौं छिरे । प्रसिद्ध बलिउड चलचित्र अभिनेता आर्नोल्डको चलचित्रबाट प्रभावित भएर शारीरिक सुगठन तर्फ लागेको रामहरी बताउँछन् । २०६२ सालबाट उनले नेपाल व्यायाम मन्दिरमा व्यायाम गर्ने शुरु गरे । समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका खनालले शारीरिक सुगठन खेललाई आफ्नो रुचिका रुपमा लिन्छन् । उनले जापानबाट नेपाल घुम्न आएकी चित्रकार जापानी युवती अकिमीसँग प्रेम विवाह गरेका थिए । हाल उनहरुको एक छोरो समेत छ ।
रामहरिको पहिलो प्रतियोगिताका २०६३ मा भएको दोश्रो मिस्टर हिमालय राष्ट्रिय खुला शारीरिक सुगठन प्रतियोगिता थियो । पहिलो प्रतियोगितामा नै उनी प्रिजजिङ्ग चरण पार गर्दै ६५ केजी बजन समुहमा पाचौं स्थान प्राप्त गर्न सफल भए । रामहरिले ०६३ सालमा भएको तेश्रो र ०६६ सालमा चौथो संस्करणको मिस्टर हिमालयमा पनि सहभागिता जनाएका थिए । उनले तेश्रोमा ६५ केजी र चौथोमा ६० केजीमा खेल्दा दुवैमा आफ्नो तौल समूहमा रजतमा चित्त बुझाउनु परेको उनले बताए ।
वि.सं. २०७१ सालमा शारीरिक सुगठन तथा फिटनेस संघद्वारा आयोजित पाचौं मिस्टर हिमालय राष्ट्रिय खुला शारीरिक सुगठन प्रतियोगिताको ७५ केजी तौल समूहमा पहिलो हुँदै शिर्ष उपाधी समेत खनालले चुम्न सफल भएका थिए । विभिन्न ६ तौल समूहमा ६५ जना पुरुष खेलाडीले सहभागिता रहेको सो प्रतियोगितामा उपाधि जित्ने क्रममा खनालले अन्य विभिन्न ५ तौल समूहमा पहिलो भएका सुरेश गुरुङ (५५ केजी), रुजेश शाही (६० केजी), अनिललाल श्रेष्ठ (६५ केजी), ज्ञाननारायण महर्जन (७० केजी) र सुशील नेवा(७५ केजी माथि) लाई पछि पार्दै उक्त उपाधी जितेका थिए । उपाधिसँगै उनले २ लाख रुपैयाँ हात पार्नुको अलावा ७५ केजी समूहमा पहिलो भए बापत थप २५ हजार नगद पनि जितेका थिए । खनाल भन्छन, “शारीरिक सुगठन खेल र व्यापारलाई सन्तुलित तरिकाबाट अगाडि बनाएको हुँदा अन्य शारीरिक सुगठन खेलाडीहरुलाई जस्तै मलाई डाइट खाने समस्या भने परेन ।”
काठमाडौंमा फेन्ड्ली पस्मिना एक्सपोर्ट नामक पसलका उनी सञ्चालक हुन । उनको पस्मिना सल युरोप, अमेरिका र एशियामा निकै लोकप्रिय रहेको उनी सुनाउँछन् । २०७१ सालमा र २०७३ पोखरामा आयोजित प्रथम र दोश्रो संस्करणको मिस्टर बुल्सम्यान राष्ट्रिय खुला शारीरिक सुगठन प्रतियोगिता क्रमशः ६५ केजी र ७० केजीमा उनि प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल भएका थिए ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय खेलकुद परिषदद्वारा २०७२ सालमा आयोजित १५ औं राष्ट्रिय शारीरिक सुगठन प्रतियोगितामा ७० केजी तौल समूहबाट उनले मिष्टर नेपालको पदवी प्राप्त गरे । नेपाल व्यायाम मन्दिरबाट आयोजना हुने धर्मश्री शारीरिक सुगठन प्रतियोगिताको १२औं, १३औ, १४औ संस्करणमा सहभागी भएर क्रमशः ६० केजीमा कास्य, ६५ केजीमा रजत र ७० केजी तौल समूहमा स्वर्ण पदक जित्न सफल भएको उनी बताउँछन् । २०७३ सालमा आयोजित प्रथम नेपाल च्याम्पियन प्रतियोगितामा उनी ७० केजी तौल स्वर्ण पदक जित्दै अन्तिम प्रतिस्पर्धामा उपविजेता हुन सफलता पाएका थिए ।
काभ्रे निवासी रामहरि आफ्नो साथी अर्जुन वर्णवाललाई नै आफ्ना प्रशिक्षक मान्दछन् । आफ्नो खेल जीवनमा प्राप्त भएका सफलताका श्रेय उनी प्रशिक्षक वर्णवाल र नेपाल व्यायाम मन्दिरका अध्यक्ष नारायण प्रधान दिन चाहान्छन् । खनालले थुप्रै राष्ट्रियसँगै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरुमा सहभागिता जनाएका थिए । सन् २०१४ मा भारतको मुम्बइमा भएको WBP को आयोजनामा भएको छैटौं विश्व शारीरिक सुगठन तथा फिजिक स्पोर्ट्स च्याम्पियनसिप उनको पहिलो अन्तराष्ट्रिय प्रतियोगिता थियो । जसमा रामहरि छनौट चरण पार गर्दै ६० केजी तौल समूहमा चौथो भएका थिए ।
सन् २०१५ मा थाइल्याण्डका बैंककमा भएको सातौँ विश्व शारीरिक सुगठन तथा फिजिक स्पोर्ट्स च्याम्पियनसिपमा समेत सहभागी भएको उनी बताउँछन् । सन् २०१६ मा हङकङमा आयोजित भएको Arnold Classic मा उनी ७० केजी तौल समूहमा सातौं स्थान हासिल गर्न सफल भएका थिए । सन् २०१६ मा आयोजित Amateur Olympia Asia शारिरीक सुगठन प्रतियोगितामा खनालले पाँचौ स्थान प्राप्त गर्न सफल भएका थिए ।
सन् २०१९ मा चिनमा भएको ६१ औं Asian Games मा ७० केजी तौलसमूहमा उनी पाचौं स्थान हासिल गर्न सफल भएको उनी बताउँछन । अन्य समयमा सामान्य आहार लिने खनाल प्रतियोगिताका तयारी अवधिभर खानामा विशेष सावधानी अपनाउँछन् । सो समयमा भेजिटेवल शुप उसिनेको कुखुराको मासुबाट शुरु हुने उनको बिहानी डाइट प्लानमा च्याउ, कुरिलो, ब्रोकाउली, शकरखन्ड्, गाजर र मुलाको शलाद दिउँसो तथा रातिको खानामा बिस बट्टा अन्डा, चिकेन व्रोष्ट र एभोगाडो सामेल हुने गरेको उनी बताउँछन् । आफ्नो शारीरिक पोज मध्ये उनलाई थाइ र डवल वाइसेप्स मनपर्ने उनले बताए ।